トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Shaxda in ay doortaan waqtiga dhacdo tii pachinko
qowladda Pachinko waqtiga ay dhacdo ay u muuqataa in ay xitaa ka badan oo image ee arrinta guud ahaan, laakiin ma jirto wax caynkaas ah. Had iyo jeer miiska soo kabashada xitaa waqtiga dhacdada joogo. Dabcan, tan waxaa lagu qabtay baxeen, laakiin si ay u noqdaan haddii madal si ay u doortaan haddii fudud had iyo jeer marka la barbar dhigo waa run, si loo yareeyo maal dheeraad ah, bari doonaa doorashada ee madal waqtiga dhacdada lagu qabtay.
First of dhan, waxaan doonayaa inaan diirada saaro waqtiga ay dhacdo waa model calaamad of dukaan kasta ah. Waayo,
model boor dukaamo, maxaa yeelay in badan oo idinka mid ah dooneyso in aad bixiso model, ku filan in ay dhacdo weyn, aad leedahay si gelin ciidan ku daydo boor in qowladda pachinko ah. Calaamadda model oo kaliya, waa waxa ku soo hagaajin set Horukon iyo sixitaanka dhidib badan had iyo jeer caadiga ah. Xulashada model waqtiga ay dhacdo, u xusuustaa ciyaartaas ee ku dayashada boor.
Taas lidkeeda, ha saarin ciidamo aad u badan, dib u soo kabashada model dhicidda waqtiga ay dhacdo waxa loogu yeero waa Xintai ah.
in Xintai, xitaa iyada oo furitaanka ah ciddiyaha in yar, si ay noogu fadhiya macaamiisha oo aan sii kordhaya goob Horukon ah, Xintai waa inta badan ka sameeyey model soo kabashada oo cagsi ah. Marka la eego
qowladda pachinko siyaasadda ganacsi halkan ■, in la kordhiyo tirada macaamiisha waa ficilka ee soo saarista heshay a, la sameeyaa si loo macaamiisha, heshay in meeshii ay dadku isugu yimaadaan iyaga oo aan waxba qaban aad uma baahna in ay soo saaraan a. Tani fiicnaan lahayd in maskaxda lagu hayo, sababtoo ah waa asaasiga ah ee saldhigga. Marka aad go'aamisay ku dayashada hit
, markeeda, laakiin waa xogta, halkan isku dayaan in ay diiradda saaraan miiska xanaaqsan maalin ka hor. Maalin ka hor saldhig xoog badan tahay, waxaa suuro gal ah in Horukon set iyo sixitaanka ciddiyaha uusan waxba iska badalin dhidib caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, in ay dhacdo block cillad, kor goob Horukon ah, waxay u badan tahay in la furo dhidib ah.
inta lagu guda jiro dhacdo, sababtoo ah waxaa kale oo jira maalinta aad rabto in aad racfaan ka heshay, laakiin aynu ku jirno qeybiso saaray, dabcan, waxay noqon doontaa meeshii ilayska xoog dheeraad ah ka badbadinin hoos u dhaca dhaqaalaha iyo soo Bixinhaynin Horukon dhigay inay si adag, xitaa sida ay tahay. Si taas loo gaaro, taagan Strong, waxaa doono hubaal badan ee u dhigida sida caadiga ah.
Dhanka kale, in miiska kacsan sida ay tahay ee dhidib ah, saamaynta uu noqon doono mid daciif ah oo aan ka jeestay oo keliya sida caadiga ah. Intaa waxaa dheer, taasoo la micno ah ay dhacdo sida dukaan in sidoo kale haddii aan ka bixin lagu lumin doonaa. Sidaas daraaddeed, murugoodo taagan si ay u helaan xawaaraha wareeg ah, oo aan sii kordhaya set Horukon ah, waxaa ku jira in la furo dhidibkii badan sida caadiga ah.